कोरोनाले यी भारतीय अभिनेत्रीको लियो ज्यान – AB Sansar
September 23, 2020 adminLeaveaComment on कोरोनाले यी भारतीय अभिनेत्रीको लियो ज्यान
काठमाण्डौं । कोरोनाको कहर जताततै छ । यसको कारण ज्यान जानेहरुको संख्या पनि बढिरहेको छ । भारत अहिलेसम्म कोरोना भएकाहरुको सख्यामा अमेरीका भन्दा ठीक पछि मात्र छ । त्यहाँ पनि कोरोनाले जनजीवनमा धेरै असर परेको छ ।
यसैबिच कोरोना भाइरसबाट भारतकी एक अभिनेत्रीको निधन भएको छ । मराठी र हिन्दी फिल्मकी अभिनेत्री तथा रंगकर्मी आशालता वबगावंकरको मंगलबार कोरोना कै कारण निधन भएको हो ।
सतारा जिल्लामा एक अस्पतालमा उपचारका क्रममा ८३ वर्षीय आशालताको निधन भएको भारतीय मिडियाले जनाएका छन् । अघि नयाँ शो आई कालुबाईको सुटिङ गरिरहेकी आशालताको टिममा काम गरिरहेका २२ जना अन्य व्यक्तिमा कोरोना पोजेटिभ देखिएको बताइएको छ । मिडियाका अनुसार कोरोना भएपछि होम क्वारेन्टाइनमा रहेकी आशालताको स्वास्थ्यमा खराबी आउन थालेपछि अस्पताल भर्ना भएकी थिइन् ।
तर अस्पतालले उनलाई बचाउन सकेन । आशालता चलचित्र भन्दा बढि रंगकर्मीका रुपमा चिनिएकी थिइन् । उनको कलाका पारखी भारत बाहेक अन्य देशमा समेत रहेका छन् । भारतीय सिने उद्योगले यसलाई ठलो क्षति भनेको छ र चलचित्रकर्मीहरुले उनलाई समवेदना दिइरहेका छन् ।
सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ , तर यो सत्यता नै हो ! आमा बन्दै श्वेता खड्का !
हेर्नु*होस अन*लाइन बाटै य’सरि हुँ’दैछ नेपाल’मा यौ’नधन्दा, बीस वर्ष मुनि’का यु’वती बढी !!
म’हिलाहरुको यी अंग छुदा आफैं सम्बन्धका लागि अपिल ग’र्छन [६ टिप्ससहित]